Kubatana - Archive - Minister of Constitutional Affairs, Advocate Eric T Matinenga, answers your questions - Week 3 - Shona - Kubatana.net - May 2010
Minister of Constitutional Affairs, Advocate Eric T Matinenga, answers your questions about the Constitution making process in Zimbabwe - Week 3 - Shona
1. Mubvunzo wedu wanhasi uri kubva kune vanhu vazhinji vemuZimbabwe, vanosanganisira Somar. Vari kubvunza kuti konzero dzedu sevanhu dzingachengetedzwa sei mubumbiro idzva remitemo?
Chekutanga ndechekuti kana dziri kodzero chaidzo chaidzo, kana munhu akandikanganisira, ini ndinofanirwa kuenda kudare kunogadziriswa. Chechipiri, ndechekuti kodzero ngadzive dzakasimba kuti pasawane munhu anogona kudzishandurashandura. Hurumende inowanza kuda kudzvinyirira vanhu, ngatiwonei kuti hurumende haingoti chero payada yoshandura konzero dzevanhu.
Chechitatu, toonawo zvakare kuti paya panoti hurumende inoda kushandura konzero nenzira yatingati muchirungu "amendment", bumbiro idzva iri ngariite kuit zvisave nyore kungoshandura nedzimwe kodzero dzakakosha. Kana zvichibvira shanduro yakadaro ngaibve yoda kutoti pabvunzwe veruzhinji.
Chechina ndechekuti, pane mapazi atinofanira kuti tione kuti aiswa kuti agadzirise kodzero dzedu. Pane inonzi "Human Rights Commission", pane inonzi "Gender Commisssion", uye "Anti-Discrimination Commission", aya mapazi anobatsira kuti tione kuti konzero dzedu dzive dzinoonekera mumitemo. Kozoitawo kuti pane vazhinhi vedu vasingakwanise kana kuziva kuti kudare chaiko vanoenda sei, konzero dzavo dzinotariswa papi, izvozvo ngationei kuti mutemo wedu wazivikanwa kuti vanhu vanyatsoziva kuti kana konzero dzavo dzakanganiswa, vanozvifambisa sei. Vanhu, nevari kumaruwa ngavazive kuti kodzero dzavo ndedzipi. Ngazvitange nekuvana vechikoro kuti navo vagoziva, uye, vagofundisawo vamwe vechikuru vasingachaziva kuverenga. Toendawo kune vanhu vakaita semapurisa nevechiuto, ngavazive kuti kana vachibata vanhu vanovabatawo nedzira dzipi.
2. Zvingaitwe sei kuti tive nechokwadi chekuti bumbiro nemitemo richachengetedzwa uye richatevedzwa nemunhu wese wemunyika kusanganisira mutungamiri wenyika, risingatyorwe tyorwe nevamwe vane masimba?
Ngationei kuti kana tichigadzira bumbiro remitemo tanyatsotaura chaizvo zviri pachena kuti, hongu, munhu angave ari President, asi kana taave paBumbiro remitemo takafanana. Ndiyo inonzi pachirungu 'equality before the law'. Nekuti kana iwe uri mukuru, ukatanga ndiwe nekutyora mutemo, vamwewo unozovatsiudzawo sei. Ngaitionewo kuti paBumbiro iri hapana mutemo unoti umwe uyu ndiye mukuru, umwe uyu ndiye mudiki. Kana tati takafanana tose, zvinoreva kuti munhu wese munyika akafanana. Torega kuti mangwana tozoti kune mamwe ma"Chef" koita dzimwe povho. Nekuti kana tiri paBumbiro, vanhu vese vakafanana. Nekudaro ngatinyotsoonei kuti patiri ipapa takafanana. Torega kuti kana munhu ari "President" toti haabatwi, mutemo ngaunyatsove pachena kuti kana vanhu vasisade "President" vanozvifambisa sei.
3. Mubvunzo wedu wanhasi uri kubva kuvanhu vakati wandei, vanosanganisira Primrose, Fredy, Onai, naClark.Vanobvunza kuti, kodzero dzezvikwata zvidiki zviri munyika, zvinosanganisira vakaremara, masope, memamwewo marudzi madiki, uye nevechingochani, dzichachengetedzwa sei mubumbiro idza?
Pane zvitatu zvatingaite kuti vanhu vakadai tinyavagadzirise sei? Chekutanga ndechekuti, ndinoona kuti zvingave avakanaka kuti tionewo kuti bumbiro rive nemutemo unoona kuti muParememde medu muvewo nemumwechete kana vazhinji vanomiririra vanhu vakaremara kana vane zvinovanetsa. Chechipiri ndechekuti, ngatiwonewo kuti vanhu vechikadzi vanyatsopiwawo mukana wekutungamira muHurumende. Ngatiisei mubumbiro kuti vanhu ivava tivaitirewo zvakanaka nekukurumidza kuti vavewo pari nani. Yatingati nechirungu 'Affirmative Action', kwete yatinoinzwa vanhu vanoti dai ndatora makambani evanhu ave edu tichiti affirmative action, ihoho hundyire, haisi affirmative action. Chechitatu ngationei kuti ma Institutions akaita sema "Anti-Discrimination Commission", nema "Gender Commission" atakambotaura aya, anokwanisa kuti atibatsire kunyatsotarisa kuti vanhu vanga vasingatariswe zvakanaka takwanisa kuti tivakadzirisirewo.
4. Kudzie ndiye abvunza mubvunzo wedu wanhasi, ari kuti, vatungamiri vehurumende yemubatanidzwa, vanokwanisa here kuti kuitwe sarudzo dzevatungamiri venyika pasina bumbiro idzva remitemo?
Hongu tinokwanisa kuenda kusarudzo kusina bumbiro idzva remitemo. Asi tinoona sekuti handizvo zvakatinakira, handizvo zvatinoda. Naizvozvo tinoda kuzoenda kusarudzo tava neBumbiro idzva emitemo rakanaka, tichikarira kuti rinenge riri Bumbiro rakasiyana neratiinaro nhasi, richava bumbiro rinonyatsoona kuti kana tichienda kusarudzo, tava kuenda kusarudzo kwete kuti tava kuenda kunorwa fanike zvakaitwa mazuva apfuura. Tinovimba kuti iBumbiro rinoti kana tapedza sarudzo tinonyatsoti tasarudza vanhu vatinoda kwete zvekuti tasarudza nekuti tamanikidzwa nangana. Ndiyo mhaka tiri kuti tiende kusarudzo tava nebumbiro idzva remitemo. Asi chikuru ndechekuti kunyangwe Bumbiro rakataura zvakanaka, isu vanhu tisati tashanduka mupfungwa, zvichatinetsa. Ngatitarise zvakaitika muna 2008, muna "March" zvakanga zvakanaka nerunyararo, paupenyu hwangu inguva yandakafarawo kuti ndakakwanisa kutaura nevanhu zvakanaka saMP. Asi tava kuzoenda kuna "June" masamba akanga asiyana, takaita sekunge taive mune imwe nyika isiri Zimbabwe asi hapana mutemo wakanga washanduka kubva muna "March" kusvika muna "June". Tinozviziva zvakaitika kune nzvimbo zhinji, zvakaitika nekuti, vanhu vemuZimbabwe, iwo ma'Chef'' enyu iwaya, vanofunga kuti kana zvinhu zvakasaitika sezvavanoda hakusisina mutemo. Saka chinhu chikuru ndechekuti ngationei kuti tapa rukudzo kumutemo. Takaona pachibvumirano chakaitwa muna September 2008, chibvumirano ichocho chinotaura kuti, mapato ese anozvipira kuti munhu wese asununguke kuita zvaanoda nezve matongerwo enyika, mapato ose anofanira kuremekedza mutemo wenyika, uye kuti vanhu vedu vechipurira, chiuto nevamwe vanofanirwa kuita basa vachiti vari kuita basa reZimbabwe kwete kuti vari kuita basa remapato ezvematongerwo enyika. Zvinoreva kuti vanhu vese vanokarirwa kuti vagopa remekedzo kubumbiro remitemo. Saka parizvino tinotarisira kuti vanhu vashanduka maiitiro avo kuti tizoita sarudzo yatinogona kudada nayo.
5. Mubvunzo wedu wanhasi uri kubva kuna Shame, ari kubvunza kuti; Zvingaitwe sei kuti vabati vezvigaro zvehurumende vaite basa ravo zvisina huwori, ndeipi dziviriro ingapiwe nebumbiro remitemo ingaite kuti mauto enyika arege kuva nebato ravakarerekera?
Ndakambotaura kuti pachibvumirano che GPA vanhu vechiuto nemapurisa vanonzi vanofanirwa kusevenza vachiti vari kusevenzera nyika yeZimbabwe kwete bato rematongerwo enyika. Naizvozvo ndinotiwo ngatiwonei kuti zvakabvumiranwa izvozvo zvipindewo muBumbiro idzva remitemo. Kuitira kuti ivo vanhu ivavo vari kumauto nekumapurisa hafazongofunga kuti vanoita zvavanoda. Tozoona zvakare kuti pabumbiro remitemo ratinaro nhasi, kune inonzi "Police Service Commission", "Defense Service Commission", "Prison Service Commission". Iwo mapato iwaya anoona kuti mauto, mapurisa neveku "prison" vanashanda sei, Chairman wavo ndiye mumwe chete, iye arizve Chairman weku "Public Service Commission". Tozoti nhai vedu wee, ko iye munhu iyeyo wega wega ndiye anonyanya kugona zvakaita sei? Kuti ndiye anonzi chairman vepapa, chairman wepapa nepapa zvekare, ko isusuwo vamwe tozoita maChairman epapi? Saka zvinenge zviri zvakanaka kuti kana tichinyora bumbiro redu remitemo tione kuti simba rose harisi mumunhu mumwe chete. Takambotaura nyaya yekuti "executive power" yakanyanya mumunhu mumwe chete. Iye zvino tava kuona kuti utungamiri hwese hwema "executive commissions" huri mumasimba emunhu mumwe chete.
Saka ngationei kuti kana tava kunyora Bumbiro redu remitemo tanyatsoongorora ipapa sezvo chisiri chinhu chakanaka kuti munhu mumwe chete agova ari iye chete anotungamirira ma "executive commissions" ose. Handifunge kuti pane chakaipa kana mukuru weku "army" kana wemapurisa akati anoda zvake kuita zvematongerwo enyika. Zvandiri kutaura ndezvekuti kana mukuru wemauto kana wemapurisa achida kuvhotera zvake bato raanoda hazvina chakaipa, asi kana ava kuudza mauto ose kuti vhoterai uyu musingade kana muchida, kana kuti anotaura kuti kana nhingi akakunda musarudzo ini handisarute. Aiwa ikoko munoti kungava kuitawo here? Saka tiri kuti kana munhu ati anoda kuti aende kuneimwe nzvimbo anoita "Member of Parliament" zvakangonaka kuti munhu iyeya asiye zvake zvechipurisa, chiuto kana chi "Prison Service" oita zvamatongerwo enyika.
Audio File Answer 1 - Shona - Basic human rights